DAAWO MUUQAAL> Gaber Soomaaliyeed oo baaq udirtay dhalinyarada Soomaalida, Gabertaan oo ku nool Swedan waxay qaati ka taagan tahay….!! | kowtharmedia.com
Home ARRIMAHA BULSHADA DAAWO MUUQAAL> Gaber Soomaaliyeed oo baaq udirtay dhalinyarada Soomaalida, Gabertaan oo ku nool Swedan waxay qaati ka taagan tahay….!!
DAAWO MUUQAAL> Gaber Soomaaliyeed oo baaq udirtay dhalinyarada Soomaalida, Gabertaan oo ku nool Swedan waxay qaati ka taagan tahay….!!
Feb 20, 2017ARRIMAHA BULSHADA, HORUMARKA DALKA, MAQAALO, MUUQAAL
Nimco> oo warqad qoraal furan oo si qaas ah kula soo hadashay dhalinyarada Soomaalida meel kasto ee dunida ka joogaan, warqadda ayaa sidatan u qoran Akhriso oo daawo Muuqaalka si aad ulla wadaagtid asxaabtaada.
“Asalamu caleykum waraxmatullahi wabarakatuhu!
waxaan kugu bisharenaya in aad maanta cadaysatay wadaninimo oo aadna kaxorowday qabyalad, una heegantahay qarannimo iyo midnimo. waan ku faraxsanahay kartida aad sida publica ugu cadaysatay, waxa aad aamin- santahay. waxaana ku ogaysinaya in caqabad badan kala kulmi doontid wanaagada. lakiin aadna aad uga bixi doontid taas ad-adeeg kuna guulaysan doontid. hadaad ku adkaysato waxaad aaminsantahay.
waxa aan kuugu dhiira galina inaad u istaagtid fidinta wanaaga aad maanta doorateen. inaad isku aruursatiin dhalinyaro joogta meesha aad joogtid oo aad kawada shaqaysaan wanaaga iyo midnimada.
Ani Nimco ka ahaan majiraan dad aan xariir la leyahay lakiin waxa aan iskudayaaya inaan iskuxiro dhalinyaro Somaaliyeed meel walba ay ka joogaan caalamka, taasna qofka iga caawin kara waa loo bahan yahay, inaad isa so aruursataan oo aad dhexda uxirataan geesinimadéyna, iyo wadannimadiina ficilkeeda aad samaysaan Dad yahow waa garanaa waana ujeednaa maanta Soomaali waxii xun inay Caalamka ku tusaalaystan.
walaal waxaan nasugaysa hawlo cul-culus oo aan xiiso iyo dheeldheel galin. hadaan rabno isbadal waa inaan ka kacna fadhiga una istaagna wanaaga iyo meesha aan taganahay. waxaad igala soo xariiri kartaan waa facebookgayga.”
SIINA RAAC FACEBOOKGEEDA SI AAD ULA XARIIRTAAN
Previous PostDaawo Sawirada: Donald Trump oo Sargaal caan ah u magacaabay la taliyihiisa Amaanka Qaranka!! Next PostKooxo hubeysan oo caawa hoygiisa ku dhex dilay Nabadoon & faahfaahino ka soo baxaya!!